Ora-nikija, rivo-mahery mandra-maraina: nizaka ny takaitran’i Desmond i Mahajanga | NewsMada
Ora-nikija, rivo-mahery mandra-maraina: nizaka ny takaitran’i Desmond i Mahajanga
Saiky rakotra fotaka sy ireo bolongam-bato natsipin’ny onjan-dranomasina nahery vaika ny androatokon’ny moron-dranomasin’i Mahajanga. Nikija be ny orana, nifofofofo mandra-maraina ny tafio-drivotra, dibo-drano ny ankamaroan’ny faritra iva, tapaka ny herinaratra… Namela takaitra tao Mahajanga ny fandalovan’ilay rivodoza Desmond.
Tanàna maro no dibo-drano ao Mahajanga vokatry ny fandalovan’ilay rivodoza Desmond tany an-toerana, ny alatsinainy alina teo. Nandravarava ny rivotra nifofo sy ny orana. Niongana ireo takelaby teny an-dalana. Maro ny hazo tapaka. Lasan’ny rivotra ny tafon’ireo tokantrano maro. Fefiky ny rano ny toerana sasany ka tsy maintsy nifindra toerana ireo mponina.
Tafakatra teny amin’ny arabe ny bolongam-bato milanja 50kg nanamorona ny ranomasina teny amin’ny « bord ». Tafakatra hatreny amin’ny arabe ny onjan-dranomasina. Natahotra ny mponina tao Mahajanga tamin’ny hamafin’ny rivotra nifofo tamin’iny alin’ny alatsinainy hifoha talata iny.
Feno vato ny 2/3-n’ny lalana teny amin’ny “bord”. Teo koa ny fako sy ny fotaka ary ny fasika, nikorontana tanteraka ny tanàna.
Omaly, niditra avy hatrany tamin’ny fanadiovana ny morontsiraka fitsangantsanganana ny tompon’andraikitra tao Mahajanga. Namerina ireo bolongam-bato teny amin’ny sisin-dranomasina ho fiarovana ny tany.
Sosokevitra nentin’ny tompon’andraikitra ny tokony hametrahana “grillage” amin’ireo rarivato mba tsy hozakan’ny rivotra sy ny onjan-dranomasina,indrindra rehefa misy rivodoza mandalo, toy izao.
Natsahatra ny fampianarana
Tsy mbola tena tafarina anefa ny tanàna. Mbola miezaka manamboatra tsikelikely ny faharavana ny tsirairay. Manao tana-maro ny mponina mamerina ny fotodrafitrasa amin’ny laoniny. Mahatsiaro tena ho samy ho tompon’andraikitra amin’ny fanarenana ny “bord” ny rehetra ka samy manao izay ho afany amin’ny famerenana ireo vatobe.
Mitsahatra ny fampianarana any an-toerana, hatry ny omaly. Misy ny lalana tapaka tsy hahafahan’ny fokontany any ambanivohitra mifandray. Tapaka ny herinaratra amin’ny toerana sasany ary maloto ny rano amin’ny faritra sasany ao Mahajanga.
Manaitra ny fanjakana hijery azy ireo ny mponina any an-toerana hamerenana haingana ny fiainam-bahoaka amin’ny laoniny.